K9 Mask® कुकुरहरूका लागि 'सफा ब्रीथ' सक्रिय कार्बन एयर फिल्टरहरू - ब्लू - K9 मास्क राम्रो एयर टीम द्वारा
घर > नयाँ > K9 Mask® कुकुरहरूका लागि 'सफा ब्रीथ' सक्रिय कार्बन एयर फिल्टरहरू - निलो
मा तुलना $ 49.00
सानो - १..49.00 USD अमेरिकी डलर मध्यम - १...। अमेरिकी डलर ठुलो - $ १२.49.00 USD अमेरिकी डलर अधिक ठूलो - $ .49.00 .XNUMX.०० अमेरिकी डलर
तपाईको घरपालुवा जनावरलाई वायु प्रदूषणबाट बचाउनुहोस्
१ - K1 एक कुकुरको लागि मास्क।
- - बदल्न सकिने 'क्लीन ब्रीथ' सक्रिय कार्बन एयर फिल्टर रिफिलहरू समावेश छ।
'मध्यम' मा 'अस्वस्थ' AQI १००-२100० प्रयोग गर्नुहोस्।
PM10 + धुलो, खरानी, ​​Lint, कालिखाना, ओजोन र परागका लागि ठूलो कण र सक्रिय कार्बन फिल्टर।
हाम्रो तुलनामा कुकुरमा लामो समय लगाउने समयको साथ सास फेर्न सजिलो छ N95 "चरम सास" एयर फिल्टरहरू।
विश्वको पहिलो वायु प्रदूषण फेस मास्क विशेष गरी तपाईंको कुकुरका लागि डिजाइन गरिएको हो। वायु प्रदूषणबाट तपाईंको कुकुरको स्वास्थ्यलाई खतरा छ।
K9 मास्कीलाई 'क्लीन्ट ब्रेथ' एयर फिल्टरहरू अनौंठो बनाउँदछ।
सक्रिय कार्बन फिल्टर - वायु प्रदूषण अणुहरूसँग विष र ओजोन घटाउने बन्डहरू.
PM10 + ठूलो कण फिल्टर - धूल, खरानी, ​​लिन्ट, कालिखान, र परागकण कब्जा गर्दछ।
Visible 99% देखिने हावायुक्त कणहरु फिल्टर गर्दछ।
निकास निकास भल्भ - प्यान्न्टि from्गबाट ​​वायु, चिस्यान र तातो रिलीज।
प्रत्येक प्रयोगको उच्च गुणवत्ताको फिल्टरेशनको लागि एयर फिल्टरहरू बदल्नुहोस्।
ताजापनको लागि हरेक प्रयोगको लागि धुने मास्क।
प्रभावी स्टाइलिंग र डिजाइन:
कोमलता र आराम को लागी सजीलो फ्लेक्स एथलेटिक जाल।
हावा फिल्ट्रेशन सुधार गर्नका लागि कुकुरको कुकुरको बिरूद्ध मास्कलाई कडा राख्नको लागि अनुहार समायोज्य घाँटी र थूथो पट्टा।
घाँटी पट्टा लचिलो टाउको चाल संग एक सुरक्षित फिट को लागी समायोजित।
मोजल स्ट्र्याप तपाईंको कुकुरको स्न्याटको आकारमा समायोजित हुन्छ।
शान्त गराउने कुकुरहरूको लागि एक अभिनव एयर निकास भल्भको साथ ईन्जिनियर गरिएको।
अस्टिन, टेक्सास र अमेरिकामा निर्मित मा डिजाइन।
K9 Mask® चार्ट सबै आकारका लागि:
उचित आकारको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मापनको रूपमा 'Muzzle Circumferences' लम्बाइ प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईंको कुकुरको लागि मास्कमा उचित पेन्टि space स्थान निर्धारण गर्दछ।
भित्ता परिभ्रमण: २.4.5--6.5. inches इन्च (-11.5-११ सेमी)
मज्जाल लम्बाई: २.1.6--2.8. inches इन्च (-4-११ सेमी)
भित्ता परिभ्रमण: २.7--9. inches इन्च (-16.5-११ सेमी)
मज्जाल लम्बाई: २.2.8--4.3. inches इन्च (-7-११ सेमी)
भित्ता परिभ्रमण: २.9--13. inches इन्च (-23-११ सेमी)
मज्जाल लम्बाई: २.3.7--4.7. inches इन्च (-9.5-११ सेमी)
भित्ता परिभ्रमण: २.13--17.5. inches इन्च (-33-११ सेमी)
मज्जाल लम्बाई: २.4.5--5.9. inches इन्च (-11.5-११ सेमी)
K9 Mask® भिजुअल साइजिंग चार्ट
हाम्रो K9 मास्क साइजिंग चार्ट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
K9 Mask® मा कसरी क्लीथ ब्रीथ (CLN) एयर फिल्टर सम्मिलित गर्ने।
कसरी K9 मास्क सुरक्षित गर्ने® प्रदुषित हावालाई भित्रिनुबाट जोगाउन कुकुरको हिज्जेमा।
K9 मास्क® जब तिनीहरू राम्रोसँग लगाईन्छ प्रभावी हुन्छन्। K9 मास्क प्रयोग गर्दै® कुकुरको स्नुउट / थूथन अन्तर्गत थूथन समायोजन एउटा पाल्तु जनावर मालिकले मास्कमा तनाव समायोजित गर्न सक्षम गर्दछ मास्कमा प्रदूषित हावालाई मास्कमा चुहिनबाट महत्त्वपूर्ण रूपमा कम गर्न। यो मात्र हावा फिल्टर बाट मात्र पारित हावा कुकुर द्वारा साँस गरिएको छ सुनिश्चित गर्दछ।
म K9 मास्क लगाउन मेरो कुकुरलाई कसरी प्रशिक्षण दिन्छु®?
तपाईंको कुकुरलाई K9 मास्क लगाउन प्रशिक्षण दिँदै® मास्क लगाएर सकारात्मक उत्तेजनाको जोडी समावेश गर्दछ।
तपाईंको कुकुरलाई मास्क प्रस्तुत गर्नुहोस् र कुकुरले यसको गन्ध लिनुहोस्।
तपाईंको कुकुरलाई सुँघ्न र पुनःप्राप्त गर्न मास्क भित्र स्नैक्स ट्रीट थप्न प्रयास गर्नुहोस्। यस प्रक्रियाले मास्कको बारेमा सकारात्मक सुदृढीकरण दिन्छ।
तपाईंको कुकुरको थुतुण्डमा केही सेकेन्डको लागि मास्क राख्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईंको कुकुरलाई मौखिक पुष्टि दिँदा, यसलाई मास्कमा राम्रो बनाउन।
यस क्रमलाई धेरै पटक दोहोर्याउनुहोस्, कुकुरको घाँटी र हूक र लूप ट्याबहरू प्रयोग गरेर थोरै ठाउँमा मास्क सुरक्षित ठाउँमा तर्फ काम गर्दै।
मास्क लगाउने बारेमा कुकुरलाई सकारात्मक मौखिक प्रतिक्रिया प्रदान गर्नुहोस्।
मेरो कुकुरले 'क्लीन ब्रीथ' (सीएलएन) एयर फिल्टर प्रयोग गरेर K9 मास्क कहिलेसम्म लगाउन सक्छ?
हामी प्रत्येक एयर फिल्टर चार घण्टा सम्म प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं। यद्यपि ठूला कण वायु अवस्था, ओसको स्तर, वा फिल्टरमा अत्यधिक फोहोरको आधारमा चाँडै हवा फिल्टर प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक हुन सक्छ।
लामो उपयोगले कुकुरको स्वाभाविक क्षमतालाई असर पार्छ विशेष गरी ant० डिग्री सेल्सियस (एफ) २° डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा माथिको तापक्रममा। यो मास्क एक छोटो अवधि को लागी प्रयोग गर्न को लागी र करीबी निगरानी मा गरीएको छ। भन्दा बढि को लागी सावधान रहनुहोस् 30 मिनेट एक समय मा। पछि 30 मिनेट तपाईको कुकुरको सास फेर्न र पेन्टि check जाँच गर्न को लागी केहि मिनेट को लागी मास्क हटाउन सक्नुहुन्छ K9 मास्क लगाउनु जारी राख्नुहोस्।
K9 मास्क हुनेछ® Wओर्क मेरो कुकुरको लागि बज्ने को रूपमा?
K9 मास्कीले थूलीको रूपमा काम गर्दछ। यो K9 मास्कको लागि दोस्रो उद्देश्य हो। मास्कको प्राथमिक कार्य कुकुरलाई प्रदूषित हावाबाट जोगाउनु हो। जे होस्, K9 मास्काले कुकुरलाई भौंकने र काटनेबाट थप्पड गर्न काम गर्दछ। ज wild्गल आगो, वा अन्य चरम मौसम घटनाहरूको चिन्ताको बेला, कुकुरहरू चिन्तित हुन्छन्। K9 Mask® लगाउने कुकुरलाई एक थूलीको रूपमा कुकुरले र यी वातावरणमा भएका वरिपरिका मानिसहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न उपयोगी छ।
के म K9 मास्क धुन सक्छु?
हो, बाह्य मास्क धोउन योग्य छ। कुकुरहरू सास फेर्दा वा पेन्टि when गर्दा शान्त हुन्छन् त्यसैले हामीले K9 मास्क यसलाई लामो समयसम्म प्रयोगको लागि ताजा र सफा राख्नको लागि धोउन योग्य बनाउनको लागि डिजाइन गर्यौं।
बदल्न सकिने क्लीथ ब्रेथ (सीएलएन) एयर फिल्टरहरू जुन तपाईं मास्कमा लिनुहुन्छ र बाहिर धुनुहुन्छ।
K9 मास्क धुनु अघि एयर फिल्टर हटाउनुहोस्। मास्क डिटर्जेंटको साथ चिसो पानीमा धोइन्छ र त्यसपछि वायु सुक्खामा झुन्ड्न सकिन्छ।